Habdhaqanka cunnada ee bulshooyinka dabaqadaha hoose - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Mona Hambraeus/Sveriges Radio.
Habdhaqanka cunnada ee bulshooyinka dabaqadaha hoose
La daabacay torsdag 21 januari 2016 kl 16.45
Cunnada ey dhallaanku cunaan ayaa ka hagaag-sanaan kara haddii ey helaan gaar ahaan iskuullaadka ka helaan war-bixin la xiriirta , waalidiintana laga qeyb geliyo. Ammuurtaa ayay ku cadaatay baaritaan lagu sameeyey laba xaafadood oo ka mid ah xaafadaha ey ku dhaqan yihiin bulshada dabadaha hoose ee ku yaala magaalada Stockholm.
Xaafadaha bulshooyinkaasi ku dhaqan yihiin ayey dhallaanka ku nooli uu cayilku kaga badan yahay kolka loo barbar-dhigo xaafadaha ey ku deggen yihiin bulshooyinka dabaqadaha dhexe iyo kuwa sare. Sidaa daraadeed loo baahayn in awoodda la isugu geeyo goobahaa, sida ey culimadu aamin-san yihiin.
Mashruuca howlahaa oo socday muddo lix bilood ah, ayaa ka koobnaa war-bixinno qoraallo oo ilmaha loogu direy reerkooda iyo waalidiinta oo kulan wada-hadal lagu dhiiri-geliyo. Wixii intaa ka dambeeyay ayey ilmuhu iskuulka ku qaateen casharri casharro la xiriira caafimaadka, oo ey u dheeraayeen shaqo guri loo direy oo ey waalidiinta si wada jir ah u qabanayeen. Shaqa guriga ayaa ku saabsanaan kartay qaar ka mid ah cunnada dukammada ee summad gaar ah leh ama maalmaha fasaxa la tijaabiyo ciyaar ka mid ah ciyaaraha dhallaanku xiiseeyaan.
Kolkii mashruucaasi la soo gabagabeeyey ayaa la dareemey iney ka soo wanaag-sanaatay hab-dhaqankii cunnada ee dhallaanka, hase yeeshee ku ekeeyd oo keliya xilligii mashruuca lagu guda jirey. Balse kolkii ey shan bilood ka soo wareegtey mashruuca ay xaaladdu halkeedii ku soo noqotay, loona baahan yahay in mashruucyada noocan oo kale ah dib loo soo celceliyo, haddii natiijo la dooneyo in mustaqbalka laga gaaro.
Dhallaanka gebi ahaan ayuu middan u baahan yahay, hase yeeshee ay laga maarmaan tahay in xoogga la saaro xaafadaha ay deggen yihiin bulshooyinka dan-yarta, sida ay sheegtay Gisela Nyberg, ahna cilmi-baare ka howl-gasha machadka Karolinska:
- Baahidu meesha ay ugu badan tahay ayuu caafimaadkooduna ugu liitaa, cayilkuna ugu badan yahay. Haddaba dhallaanka xaafadahaa ku dhaqan ayey baahidu ugu badan tahay.